[प्रकार]: कप प्रकार फोल्डिंग प्रकार [उपयोग]: यसलाई सेभर कोहरा र धुन्ध, अटोमोबाइल निकास, भान्छा, आदिमा लगाउनुहोस्। [प्रकार्य]: कुशलतापूर्वक हावामा सबै प्रकारको कणहरू फिल्टर गर्नुहोस्। [हामीसँग प्रमाणपत्रहरू छन्]: एफडीए / सीई / एनआईओएसएचको लागि आंशिक क्षमता [अवधि]: हल्का प्रदूषण-pollution० घण्टा, मध्यम प्रदूषण-30० घण्टा, भारी प्रदूषण-२० घण्टा, गम्भीर प्रदूषण-8 घण्टा। [नोटहरू]: १. यदि मास्क बिग्रिएको छ, नम वा सास फेर्दैन भने कृपया मास्क तुरुन्तै बदल्नुहोस्। २. डिस्पोजेबल मास परिमार्जन, धुनुहोस् वा आदानप्रदान नगर्नुहोस् ...
[प्रकार]: कप प्रकार फोल्डिंग प्रकार [उपयोग]: यसलाई सेभर कोहरा र धुन्ध लगाउनुहोस् ， मोटर वाहन निकास, भान्छा, आदि। [प्रकार्य]: कुशलतापूर्वक हावामा सबै प्रकारको कणहरू फिल्टर गर्नुहोस्। [हामीसँग प्रमाणपत्रहरू छन्] ： एफडीए / सीई / एनआईओएसएचको लागि आंशिक क्षमता [अवधि]: हल्का प्रदूषण--० घण्टा, मध्यम प्रदूषण-30० घण्टा, भारी प्रदूषण-२० घण्टा, गम्भीर प्रदूषण-8 घण्टा। [नोटहरू]: १. यदि मास्क बिग्रिएको छ, नम वा सास फेर्दैन भने कृपया मास्क तुरुन्तै बदल्नुहोस्। २. परिमार्जन नगर्नुहोस्, धुनुहोस् वा डिस्पोजेबल मा एक्सचेन्ज गर्नुहोस् ...